Sida loo Tirtiro Farriinta Tooska ah ee Barta Instagram ▷ ➡️ Followers ▷ ➡️
Sida loo tirtiro farriinta tooska instagram
July 29, 2019 0 comments 1340
Tooska instagram-ka ayaa siiyay app instagram-ka hawo cusub. Hadda isticmaaleyaashu kaliya maahan inay ku dhajin karaan sawirada iyo fiidiyeyaasha masraxa. Laakiin sidoo kale waxay la xiriiri karaan isticmaaleyaasha kale ee nidaamka. In kasta oo ay inyar inyar ahayd kadib markii hawshani ku biirtay shabakadda bulshada. Wali waxaa jira isticmaaleyaal aan garanaynin sida ay u shaqeeyaan. Sida loo tirtiro farriinta tooska instagram iyo xitaa sida loo diro. Sidaa daraadeed waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Si toos ah Instagram
Tooska tooska instagram-ka ama tooska instagram-ka waa adeega fariimaha tooska ah ee masraxa instagram. Muuqaalkaani waxaa lagu soo kordhiyay shabakada bulshada isla markii ay iibsatay boqortooyadii Facebook. Shirkadan gudaheeda waxaa kujira seddex meelood oo waaweyn, instagram, Facebook iyo Whatsapp. Labadan ka mid ah waxay leeyihiin adeegyo farriin, marka loo eego WhatsApp, kani waa barnaamij fariin ah. Halka Facebook ay sidoo kale leedahay barnaamij loogu talagalay adeegyadeeda farriinta, oo loo yaqaan Messenger.
Markaad ka tirsan tahay shirkadda Facebook, instagram waxay si toos ah ula wadaagaan astaamaha qaarkood Messenger iyo Whatsapp. In kasta oo ay sidoo kale leedahay astaamo u gaar ah, taas oo taas kaga duwan tan. Laakiin, in kasta oo ay leedahay astaamahan, haddana adeeggeedu wali xoogaa xadidan yahay. Tusaale ahaan, labada madal ee WhatsApp iyo madal Messenger waxay leeyihiin wicitaanno fiidiyoow ah. Waa kuwee aaladda ka mid ah aaladaha lagu jiido maqnaashaha tooska ah. Xitaa sidaas oo ay tahay, adeegga farriinta instagram-ka ayaa si ballaadhan u ballaariyey howlaha madbacadda. Adeeggeedu, sida howlaha kale ee madal, waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Labadaba way diraan sida loo tirtiro farriinta tooska ah ee instagram, waa mid aad u fudud in la fuliyo. Marka xigta waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Sida loo tirtiro farriimaha
Gudaha instagram-ka waa suurtagal in la diro farriimo. Oo weliba waa suurtagal in laga saaro. Ka soo horjeedda waxa dad badani u maleyn karaan, habka loo qoro sida loo tirtiro farriinta tooska ah ee instagram waa mid aad u fudud. Waxa kaliya ee ay tahay inaad haysato ayaa ah barnaamijka instagram-ka ee laga soo dejiyey qalabkaaga gacanta. Maaddaama ay ka duwan tahay Messenger ama WhatsApp, tooska instagram ma laha barxad ama barnaamij madax bannaan. Intaas waxaa sii dheer, ma geli kartid instagram toos ah bogga rasmiga ah ee 'instagram', maxaa yeelay tani waxay ka mid tahay xaddidaadkeeda gelitaanka adeegga farriinta. Marka xigta waxaan ku tusi doonaa sida loo tirtiro wadahadalka iyo sida loo tirtiro farriinta tooska instagram:
Sida saxda ah ee looga tirtiro farriinta shaashada tooska ah ee instagram-ka waa sida soo socota:
Gali magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah boggaaga instagram.
Bilowga instagram-ka waxaad arki doontaa shay sare. Kani wuxuu leeyahay kamarad ku taal geeska bidix, magaca instagram, astaanta IGTV. Ugu dambeyntii, Astaanta diyaaradda warqadda ee mataleysa tooska instagram, gali.
Bogagga tooska ah ee Instagram gudaheeda waxaad ku arki doontaa liis kale oo sare, kan wuxuu leeyahay magacaaga adeegsadaha, ikhtiyaarka si loo duubo oo loo qoro farriin cusub. Kaliya ka hooseeya tani waa mashiin raadinta.
Haddaad rabto, waad raadin kartaa magaca adeegsadaha aad ku beddelaneyso farriinta aad rabto in aad tirtirto. Waxa kale oo aad ka heli kartaa liiska wada hadalka ee ka hooseeya mashiinka raadinta. Liiskan waxaa loo kala soocayaa kii ugu dambeeyay illaa wadahadalkii ugu da'da yaraa.
Markaad hesho wada hadalka aad raadineyso. Riix oo hay farriinta lagu dirayo oo aad rabto in aad tirtirto. Waqti cayiman ka dib markaad farta ka baxdo farriinta, ikhtiyaarka tirtirka ayaa la arki doonaa. Riix ikhtiyaarkan iyo voila.
Tirtir wada sheekeysi
Habka loo tirtiro wada hadalka oo dhan ayaa aad ugu fudud sida loo tirtiro farriinta tooska instagram. Si aad u bilowdo hanaankan waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Gali barnaamijka instagram. Gali magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah
Bilowga waxaad arki doontaa liiska ugu sareeya. Dhinaca midig waxaad ku arki doontaa bilowga diyaaradda warqadda ee mataleysa instagram toos.
Guji badhanka diyaaradda.
Raadi wadahadalka aad rabto inaad tirtirto. Sidii hore loo sheegay. Wadahadalka waxaa laga dalbaday kii ugu dambeeyay ilaa kan ugu da'da weyn.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa wada hadalka adiga oo galaya magaca adeegsadaha aad ku lahayd mashiinka raadinta.
Markaad hesho wada hadalka, sii wad inaad riixdo oo fartaada saar. Sida habka of sida loo tirtiro farriinta tooska instagram. Ikhtiyaarka tirtirka ayaa soo bixi doona. Riix ikhtiyaarkan ka dibna wadahadalka mar dambe kuma jiri doono liiskaaga.
Sida loo bilaabo wada hadalka
Si aad u bilowdo wada sheekaysi toos ah oo toos ah shaashadda. Waa lagama maarmaan inaad haysato isticmaale instagram, iyo sidoo kale barnaamijka shabakada bulshada. Sidaan horeyba u soo sheegnay, toos tooska instagram-ka waxaa lagu heli karaa isla gudaha barnaamijka instagram. Si ka duwan adeegyada kale ee farriimaha tooska ah sida Messenger iyo Whatsapp oo leh qalab ay iyagu leeyihiin iyo barnaamij gaar ah oo loogu talagalay farriimaha. Dacwada instagram toos ayaa aad ugu eg Messenger. Labada adeegba waxay ka dhasheen meel, Facebook Messenger iyo instagram toos ah. In kasta oo toos toosh instagram aysan laheyn barnaamijkeeda hadda. Runtu waxay tahay inay suuqa ka sii wadday waddamada qaarkood.
Taasi way fududahay sida loo tirtiro farriinta tooska instagram. Sidoo kale way fududahay in la bilaabo wada hadalka. Si loo bilaabo mid waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Aad qaybta tooska ah ee instagram oo ku taal geeska kore ee sare ee bilowga barnaamijka instagram.
Halka aad ka heli karto xulashooyin kala duwan. Qaybta sare ee tooska instagram-ka waxaad ku arki doontaa in magacaaga adeegsigu yahay, sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar u leh sawir-gacmeed. Ugu dambeyntiina waxaa jira astaamo leh qalin iyo warqad. Midigta sare ee midigta sare. Kani waa ikhtiyaarka si loo bilaabo wada hadalka. Guji.
Meeshaan waxaad kaheleysaa mashiinka raadinta iyo liiska adeegsadaha aad raacdid.
Gudaha tooska instagram-ka waxaad farriin ugu diri kartaa ugu badnaan dadka 15.
Ka xulo isticmaaleyaasha liistada. Ama geli magaca isticmaaleyaasha aad rabto inaad wadahadal kula bilowdo mashiinka raadinta.
Isticmaale kasta oo aad dooratid ayaa kula soo muuqan doona goobada ku xigta buluug.
Guji sii wad oo qor farriinta.
Kadib u dir adiga oo gujinaya አዶiska diyaaradda warqad ee ku taal santuuqa qoraalka.
Markasta oo aad qof u qorto, ama qof kuu soo qoro. Instagram waxay dirtaa codsi fariin ah. Haddii aad aqbasho dalabka, waad arki kartaa fariinta isla mar ahaantaasna isticmaalaha aad aqbashay wuu sii wadan karaa farriintaada. In kasta oo aad baajiso codsiga, farriimaha uu isticmaaleha kuu diray ma awoodi doontid inaad aragto.
Maxaad ku samayn kartaa gudaha tooska ah?
Waxyaabo kala duwan ayaa lagu samayn karaa isla shaashada tooska ah. Qaarkood waxay gaar u yihiin adeeggaaga. Tallaabooyinka kala duwan ee lagu samayn karo isla shaashadaha tooska ah waa kuwan soo socda:
U dir qoraal
Gudaha toos tooska ah kumbuyuutarka toos looma diri karo farriimaha. Sidoo kale waad diri kartaa adiga iyo kuwa kale ee isticmaala daabacadaha. Si tan loo sameeyo waa inaad kaliya riixdaa astaanta diyaaradda warqad oo ku taal daabacaad kasta Instagram. Gali magaca adeegsadaha mashiinka raadinta ama ka hel liiska isticmaaleyaasha. Ka dib riix dir. Waa in la ogaadaa in haddii aad dirto daabacaad isticmaale leh akoon gaar ah isla markaana isticmaaleha aad u dirtay daabacaadda uusan raacin koontada, ma awoodi doontid inaad daawatid daabacaadda.
U dir sheekooyinka
Waxaad sidoo kale sheekooyin uga diri kartaa adeegsadayaasha kale iyo waliba kuwaaga. Si tan loo sameeyo waa inaad gasho sheekada aad rabto inaad dirto. Haddii ay ka timid isticmaale kale, guji badhanka diyaaradda oo ku yaal geeska midig hoose. Raadi isticmaale si aad ugu dirto oo aad yeeshid. Haddii sheekadu tahay mid adiga kuu gaar ah, waxaa jira laba qaab oo loo diro. Mid waa haddii sheekada mar hore la daabacay iyo mid kale haddii aan wali la daabicin. Haddii horey loo daabacay isla sidaas ayaa la sameeyaa marka ay tahay daabacaad isticmaale kale. Haddii aadan daabicin, waa inaad gelisaa sheekooyinka instagram. Samee ama baar sawir ama muuqaal. Kadib guji "dir". Raadi isticmaalaha oo dir.
Ku duub maqalka
Mid ka mid ah qalabyada aan laga heli karin isla goobta tooska tooska ah ayaa ah maqalka codka. Qalabka caanka ah ee adeegyada kale sida Whatsapp. Hadda tani waxay suurtogal u tahay adigoo riixaya ama qabanaya sumadda makarafoonka ku yaal meel kasta oo fariin DM ah.
U dir sawirro iyo fiidyowyo
Maadaama aad u soo diri kartid dhejiska instagram, waxaad sidoo kale u soo diri kartaa sawirro ama fiidiyow ka socda rugtaada. Tan adoo gujinaya badhanka sawirka ee kujira menu-ga liita ee wadahadal toos ah instagram ah.
U dir hibo
Waxa kale oo aad u diri kartaa hibo, tan haddii aad gujiso icon dhejiska oo ku yaal qaybta hoose ee wadahadal kasta. Ka dib guji ikhtiyaarka "gif".
U dir xajiyeyaasha
Si aad ugu dirto calaamadaha wada-hadalka wadahadalku waa inaad sameysaa isla markaad diraysid hibooyinka, markan ma aha inaad u rogtid hiif.
1 Si toos ah Instagram
2 Sida loo tirtiro farriimaha
2.2 Tirtir wada sheekeysi
3 Sida loo bilaabo wada hadalka
4 Maxaad ku samayn kartaa gudaha tooska ah?
4.1 U dir qoraal
4.2 U dir sheekooyinka
4.3 Ku duub maqalka
4.4 U dir sawirro iyo fiidyowyo
4.5 U dir hibo
4.6 U dir xajiyeyaasha
Waa maxay Instagram oo sidee loo isticmaalaa?
Waa maxay dhibcaha cagaaran ee ku yaal Instagram?